China factory 1.2m gbajiri agbaa ahihia ndi ahia na ndi n’enye ha | Hongli
Ngwá ọrụ ndị ọzọ na-enyere aka na-agbaze ma na-eme ka mmiri dị n'ime ya bụ ọkụ a na-asacha ya. Mgbe amịpụtara nwa oge, adịghị ọcha nke oghere ndọtị ga-apụta. N'oge a, ọ dị mkpa iji dochie anya ntụtụ a wụrụ awụ anwụ. Ekwesịrị ịgba ọkụ dochie anya isi ntụtụ ahụ iji wepụ ihe polma ndị ọzọ na-adịghị ọcha na isi nwụrụ. A na-agbanye ọkụ ahụ na spinneret iji wepu polymer residual na adịghị adịghị mma. Na akụrụngwa nke akwa na-agbaze akwa na-emepụta ahịrị, n'ozuzu, ndị mmadụ na-eji PP. N'ikwu okwu ya, a ga - eji igwe na - agbaze ihe na - agbaze ọkụ (mmiri na - agbaze ala, na --eme ka ọ dị ala). Polypropylene bụ otu n'ime ihe ndị e ji egbutu egbu n'ọtụtụ ebe na usoro ịgbaze agbaze. Na mgbakwunye, ihe ndị na-ejikarị polymer ihe eji egbu egbu na usoro ịgbaze gụnyere polyester, polyamide, polyethylene, Teflon, polystyrene, PBT, EMA, EVA na ndị ọzọ. Ofdị polymer na-ekpebi ebe ọ ga-agbaze na akụrụngwa nke ọmụmụ. Maka akụrụngwa ọ bụla nke polymer, enwere usoro ịgbaze na ntaneti kwekọrọ, dị ka nke a na-ekpo ọkụ ọkụ, nha nha ogologo-ncha, ụdị ịghasa, usoro akụrụngwa ihicha na ihe ndị ọzọ.
Ma enwere ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ogo nke akwa agbaze agbaze. Arụ ọrụ nke agbaze na ntanetị na ngwaahịa na-ezo aka na anụ ahụ na akụrụngwa, dịka ike ngwaahịa, permeability ikuku, dayameta fiber, wdg, n'ihi usoro ịgbaze na usoro ịgbaze, enwere ọtụtụ ihe na-emetụta. Enwere ike idozi ihe ndị ahụ dịka ọ dị mkpa na usoro nke ịgbaze ịgba, dị ka ọnụego mkpocha gbazee, okpomoku agbazere, okpomoku na ọsọ nke ikuku gbatịa ọkụ, ịnata anya na ihe ndị ọzọ.
Emebere ngwa ngwa ahaziri iche ma megharia usoro nke meltblown maka ndị ahịa nwere nkọwa sitere na 400mm-1600mm. Enwere ike iji eriri mmepụta reciprocating ọ bụghị naanị maka imepụta akwa meltblown, kamakwa maka imepụta ihe nhichapụ mmiri na ihe nhicha ikuku. A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka mmiri dị n'ime mmiri na-agwọ mmiri, ụlọ ọrụ mmanụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ, nwere ụdị edo edo, izi ezi zuru oke, mmetụta doro anya, na mmetọ siri ike na-ejikwa ike na ogologo ọrụ. A na-ejikarị ihe ndị na - eme ikuku ikuku na - eme ka ikuku dị ọcha, gụnyere ma ọ bụghị naanị maka nsacha ikuku dị n'ime ụlọ, nhazi ikuku ikuku, wdg Ọ nwere uru nke arụmọrụ dị elu na ike uzuzu dị elu.
Reciprocating mmepụta akara ụdị
Ahaziri 400-1200mm megwara usoro eji emepụta agbaze agbaji
Prototype nke usoro ntụtụ ụgbụ mmepụta ihe:
Ahaziri ahịrị na-emepụta 400-600mm ụdọ ụyọkọ gbajiri agbaji
Enwekwuanya ile anya na ogho anwụ
Okwu Mmalite Genera
* Linelọ mmepụta a nwere otu ihe eji achọ mma, ihe na - agbaze agbaze, eriri mgbasa, igwe na - agbagharị ... wdg.
* O zuru akpaka site na ihe oriri ruo n’ikpeazụ gbazee ịkpa akwa, teknụzụ tozuru okè, ọrụ kwụsiri ike, PFE nwere ike iru 95 na n’elu.
* Ike imeputa site na 280kg ~ 300kg, ikike nrụpụta ọrụ ahụ dabere na ngwa igwe na-agbaze ma na-agbaze nha ebu.
2. rodudị mmịpụta: Ntighari & Vetikal Blow Down Down
4. Ihe Ndị E Debere: PP
5.Obi Mgbo: 1200MM
6.Puputa ikike: 280 ~ 300KG / 24Hours
7.Designed Max. Ọsọ: 5M / Nkeji
8.Total ike: 60KV
1.55 Nkuzi Nchọgharị Single: 1set
3.Air Ngwaọrụ eji ekpo ọkụ
7.Servo na-emegharị ma na-egbutu ngwaọrụ
Ọrụ Mgbe Ahịa Ahịa:
1. Nkwado vidiyo ntinye, na nkwukọrịta ndụ vidiyo na mmezi enwere obere nsogbu.
2.Free spare Parts: Wfọdụ akụkụ mmiri mara mma dị ka
Akwụkwọ ikike 3.Whole Machine: otu afọ
400-600 gbajiri agbaji na-agba agba agba